Tsy Momba Ny YouTube Ihany Ny Sivana Atao Amin’ny Aterineto Any Pakistàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2016 12:05 GMT
“Zoko ny Miditra” sary fanentanana avy amin'ny Bytes4All. Asa tanan'i Anny Zafar.
Navoaka voalohany tao amin'ny The News Ity lahatsoratra ity. Averina adika eto nahazoana alalana.
“Ny andro taorian'ny nahafatesan'i Zia no andro nahafahako nahazo telefaonina raikitra voalohany tao anatin'ny dimy taona. Talohan'izany, niady aho mba hifandraisana tsy tapaka amin'ny mpiara-miasa amiko, ary nahatonga ny tatitro ho sarotra kokoa”, hoy ny mpikatroka menavazana mafana fo farany sady mpanao gazety Najma Saddeque nahatsiaro rha ilay izaho nipetaka tao amin'ny biraony iny mba hiresaka momba ny Dinidinika momba ny Hetsiky ny Vehivavy.
“Izany no fomba tsara indrindra hanasarotana kokoa ny asan'ny mpanao gazety, tsy ilaina ny sivana mivantana. Asarotina fotsiny ny fanaovan'izy ireo ny asany.” hoy Saddeque.
Fotoanan'ny boaty foana saro-pantarina izany izay misolo ny toeran'ny tantara notapatapahana, nambara ho tsy mendrika ho an'ny fanjifam-bahoaka, fotoana izay anarahana maso akaiky sy “andinihana fatratra” ny famoaham-baovao tsirairay.
Am-polo taona atỳ aoriana, moa ve niova ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fandehan-javatra? Toa eny, nefa isika tsy lavitry ny fiverenana mankany aoriana hilaza ny antsasaky ny marina, voatapo-drano, dika voadinika lalina amin'ny zava-misy marina. Raiso, ohatra, ny famoretana ny fahalalahana miteny anaty tranonkalam-pifandraisana izay vao mainka niharatsy foana. Toy ny amin'ny media nahazatra hatrizay, manizingizina ny fanjakana fa natao izany mba “hiarovana” ny vahoaka sy ny firaisam-pirenena.
Raha nentin'ny vondrona miaro ny zo sy ny olom-pirenena teo amin'ny fitsarana ny fanjakana noho ny fanakanana ny YouTube, nizara ny tebitebin'izy ireo momba ny zavatra tsy mazava ataon'ny fanjakana ny filohan'ny fitsaràna, Justice Mansoor Ali Shah. Tsy azo sakanana noho ny antony amin'ny fiarovam-pirenena, fomba fisainana na fivavahana ny zo hahazo torohay. Ary raha tsy maintsy atao izany, tokony ho “voalanjalanja” ny famerana azy.
Nahoana no nosakanana ny YouTube?
Misy fomba ve hanakanana ilay vontoaty azo melohina ary hamelàna ny fahazoana ny sisa amin'ilay vohikala? Inona no fiarovana ho an'ny orinasa vahiny, toy ny Google, miatrika izany toe-javatra izany? Inona no fepetra raisiny mba hahatonga ny orinasa iray ho mifanaraka amin'ny lalàna Pakistane?
Nosakanana ny YouTube noho ny lahatsary miteny ratsy an'Andriamanitra naseho tao amin'ilay sehatra. Tsy nisy fomba nahafahana namela ny fahazoana ny sisa tamin'ilay vohikala sady manakana fotsiny iny lahatsary iny. Mety ho nitaky fanovàna làlana eo amin'ny soson'ny HTTPS azo antoka amin'ny Aterineto izany – dingana iray na dia manohitra tanteraka izany aza ny Fahefana misahana ny Fifandraisan-davitra ao Pakistana. Tsia, tsy manana elanelam-panahy ho fiarovana i Pakistana ary tsy manana ihany koa lalàna ampy hihfehezana ny fomba fandrindràna ny vontoaty amin'ny Aterineto. Raha ilaina, ny lalànan'ny aterineto ao Pakistana dia mifototra amin'ny fanapahankevitra “ad hoc” izay atao ao anatin'ny tsy fisian'ny mangarahara sy ny tsy fandraisana andraikitra.
Raha noresahana ela ny fanokafana ny YouTube, nanolo-tànana ny Google i Justice Mansoor Ali Shah mba hangataka ny zavatra azo atao hametrahana dika ho an'ny ao an-toerana amin'ny YouTube ao Pakistana. Ny valiny: fomba fanasaratsaràhana vontoaty voafaritra mazava, rafitra araky ny lalàna sy tombotsoan'ny fandraharahana matanjaka ho an'ny Google.
Ary dia manana izany isika ankehitriny: manana “dika ho any ao an-toerana” amin'ny YouTube i Pakistana. Ankehitriny, tokony handray sy hanaiky ny didim-pitsarana ilay orinasa, izay mitaky ny hanakànana ny vontoaty sasany, toa hanaraka antsakany sy andavany izany izy.
Na izany aza, telo taona taorian'ny fanakànana voalohany, tsy nisy tena niova teo amin'ny lafiny araky ny lalàna, afa-tsy hoe nofoanan'ny Praiminisitra ny Komity Iraisan'ny Ministera ho an'ny fanombanana ny vohikala – fahefana Orwellian iray izay noheverina ho tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny vontoaty amin'ny tranonkalam-pifandraisana. Ankoatra izany, nanao izay handrosoana lalàna iray anisan'ny ratsy indrindra momba ny heloka bevava amin'ny aterineto ao anatin'ny faritra ny Minisiteran'ny IT.
Ny Fitsarana Tampony, amin'ny lafiny iray hafa, dia eo am-pandinihana ny tsy mampitombina ilay fandrarana ary manambara ny ad hocism-n'ny fanjakana amin'ny fampiharana azy. Izay lafin-javatra izay ihany dia afaka hanova ny zavatra rehetra ho an'ny fahalalahana miteny ao Pakistana amin'ny fanarahana maso henjana ny sivana ataon'ny fanjakana amin'ny anaran'ny fampanarahana ny Fitsipika.
Fa hety ve? Tsia raha toa ny manohy ny governemanta mbola manohy ny fanelingelenana ny fitantaràna amin'ny alalan'ny fametrahana fampisehoana lehibe sy hahatonga orinasa lehibe iray hilefitra. Tsia rehefa i Google mihitsy no mety hihevitra ny fandefasana any Pakistana, na teo aza ny fanekeny tany aloha hanao ny mangarahara sy ny maha-tompon'andraikitra araka ny lalàna.
Nampahafantarin'ny PTA ny Fitsarana Tampony fa tokony hihetsika haingana ny governemanta hanàla ny fanakanana ny YouTube satria tsy ho hita intsony ao amin'ny anaran-tsehatra .pk-n'ilay vohikala ny lahatsary manafintohina. Fa ny hany antony nametrahana ny fandraràna dia noho ny fisian'ilay lahatsary mihitsy.
Nefa mihoatra lavitra noho ny fanesorana fotsiny ny fandraràna ny YouTube izany. Telo taona nitolomana sy nitakiana ny fandrindràna ataon'ny tena ihany ho an'ireo vondrona nosazian'ny fanjakana no natsahatra haingana. Misy ankehitriny ny sehatra ho an'ny adihevitra momba ny fahamendrehan'ny sivana any Pakistana, ary ny hadalàna sy ny zava-poana amin'ny sivana atao amin'ny Aterineto. Atao any amin'ny fitsarana farany ambony indrindra io adihevitra io. Izany dia manome antsika fahafahana hanana fifanakalozan-kevitra an-kalalahana, mba hitsapàna ny lalàna sy hanoherana ny famoretana. Fomba iray ahafahana mitaky sehatra sy handavana ireo sàkana izay mametra ny fahazoantsika torohay.
Maro kokoa ny fanontaniana, inona no mitranga raha lany ilay lalàna momba ny heloka bevava ao amin'ny aterineto? Hotakiana amin'ny Google ve ny hanomezany ny torohain'ny mpampiasa azy? Moa ve ny hetsika heloka bevava hoentina hamelezana ireo mpanohitra ara-politika? Moa ve hoampangaina sy ho ampidirina am-ponja hatramin'ny fito taona ny olona noho ny lalàna misy tsininy? Iza no hihazona ilay orinasa ho tomponandraikitra amin'ny fanondroan-oterana ao anatin'ny firenena iray izay ny Minisiteran'ny IT no mampiditra lalàna miasa mba hahatonga ny olom-pirenena ho mpanao heloka bevava, fa tsy mba hiarovana azy ireo?
Misy ny mankalaza ilay fanapahankevitra, angamba satria ilay vohikala ankehitriny dia azon'ireo izay tsy dia manana fahafehezana teknolojia ampy hampiasàna proxy. Fa ho an'ny maro amintsika, tsy momba ny YouTube irery velively izany. Omaly sy anio izany dia momba ny fanarahana maso ataon'ny fanjakana amin'ny fitondrantena, ny fivavahana ary ny fiavaham-pirenentsika.
Na misy na tsy misy YouTube, miankina amintsika tsirairay avy ny mahafantatra raha tiantsika ny hieritreritra manakiana sy hitaky ny zo malalaka amin'ny fahazoana torohay, na hanaiky ny dikan'izany novokarin'ny fanjakana.